आज (शुक्रबार) चन्द्र ग्रहण लाग्दै, कति बेला र कस्तो देखिन्छ ? « Pen Nepal
आज (शुक्रबार) चन्द्र ग्रहण लाग्दै, कति बेला र कस्तो देखिन्छ ?
Published On :5June, 2020 8:42 am By :
काठमाडौं । आज शुक्रबार ५ जुन (२३ जेठ) चन्द्र ग्रहण लाग्न गइरहेको छ, जसलाई नेपालबाट पनि देख्न सकिनेछ । यसअघि पछिल्ला चन्द्र ग्रहण पुसमा देखिएको थियो ।
आजको चन्द्र ग्रहण नेपाली समयअनुसार रातको ११ वजेदेखि सुरु भएर २ वजेर १९ मिनेटमा समाप्त हुनेछ । यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव १२ वजेर ३९ मिनेटमा देख्न सकिनेछ । यो चन्द्र ग्रहण एशियाभरीका साथै युरोप, अष्ट्रेलिया र अफ्रिकाबाट पनि देख्न सकिनेछ ।
आज लाग्ने चन्द्रग्रहण ‘पीनम्ब्रल’ अर्थात उपछायाँ हो । यसको अर्थ पृथ्वीको मुख्य छाँयाभन्दा बाहिरको भाग चन्द्रमामा पर्नेछ, जसले यसको चमक फिकाजस्तो हुनेछ । उपछाँया ग्रहण भएकाले यसको त्यति असर हुनेछैन । मात्र चन्द्रमा केही धमिलोजस्तो देखिनेछ र यसले चन्द्रमाको ५८ प्रतिशत भाग मात्र ढाक्नेछ ।
यो ग्रहण त्यति सजिलै देखिने छैन । यदी चन्द्रमामा पुरै प्रभाव भएको समयमा धेरै ध्यानपुर्वक हेर्दा देखिनेछ र आकास पनि सफा हुनु पर्नेछ । यसो भएमा चन्द्रमाको उत्तर र दक्षिणी भागको चमकमा अन्तर खुट्ट्याउन सकिनेछ ।
ग्रहण दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा बाक्लो छाँया र अर्को पातलो छाँया । पृथ्वीको मुख्य छाँया चन्द्रमामा पर्दा कालो हुन्छ र अध्यारो देखिन्छ भने बाहिरी भागको छाँया पर्दा केही धमिलो मात्र देखिन्छ । बाक्लो छाँयालाई ‘अम्ब्रल’ भनिन्छ भने पातलोलाई ‘पिनम्ब्रल ।’ आज लाग्ने ग्रहण पिनम्ब्रल हो ।
सन् २०२० मा जम्मा ६ वटा ग्रहण लाग्नेछ । यसमा दुई सुर्य ग्रहण र ४ चन्द्र ग्रहण छन् । पहिलो चन्द्रग्रहण १० जनवरीमा लागेको थियो भने आजको दोश्रो हो । यसपछि ५ जुलाई र ३० सेप्टेम्बरमा चन्द्रग्रहण देख्न सकिनेछ । सुर्य ग्रहण भने २१ जुन र १४ डिसेम्बरमा लाग्नेछ ।
सुर्यको परिक्रमा गर्ने क्रममा पृथ्वी सुर्य र चन्द्रमाको बीचमा यसरी पुग्दछकी पृथ्वीको छाँयामा चन्द्रमा लुक्न पुग्दछ । यो त्यतिखेर संभव हुन्छ जब सुर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा आ–आफ्नो कक्षमा घुम्ने क्रममा जब एउटै सरल रेखामा पर्दछन् । पूर्णिमाका दिन यस्तो संभावना अधिक हुन्छ । जब सुर्य र चन्द्रमाको बीच भागमा पृथ्वी पुग्छ र यसको छाँया चन्द्रमामा पर्दछ । पृथ्वीको छाँया परेको चन्द्रमाको भाग अन्धकार देखिन्छ ।